अफिसबाट घर आउनेबित्तिकै युवतीले शारिरिक सम्बन्धको माग गर्न थालेपछि भयो हंगमा
प्रकासित मिति : १९ श्रावण २०७६, आईतवार प्रकासित समय : २१:०६
जब कुनै पुरुषले महिलामाथि उनको मर्जीबिना शारिरिक सम्बन्ध सम्बन्ध स्थापित गर्छ भने त्यो करणी हो तर यदि महिलाले पुरुषलाई उनको मर्जी बिना यस्तो गर्न बाध्य बनाए के त्यो पनि करणी होइन र रुइंगल्याण्ड र वेल्सको कानूनमा यो बलात्कार होइन तर यो घटनामाथि अध्ययन गर्ने एक लेखकले सायद यसलाई पनि करणीको संज्ञा दिनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छिन् ।
उनी भन्छन्, ‘म केही गर्न सक्दिनथेँ । त्यसपछि म नुहाउन गएँ र मलाई थाहा भएन कि म कतिबेर सम्म शवरमा थिएँ । त्यसपछि म कोठामा छिरे, उनको पहिलो प्रश्न थियो, ‘रातीको खानामा के छ?
उनी भन्छन्, ‘मलाई मानिसहरुले किन घर नछोडेको त भन्न थाले । यो मेरो घर थियो जुन मैले आफ्नो बच्चाका लागि किनेको थिएँ र पैसा पनि मेरो नै थियो त्यसकारण म आर्थिक रुपले सम्बन्धमा बाँधिएको थिएँ । मानिसहरुलाई ममाथि अझै पनि विश्वास छैन किनभने मानिसहरु भन्छन् कि तिमीले किन उनलाई कुटेनौं?
डा.वियरेले केही अन्य पुरुषसँग पनि अन्तरवार्ता गरिन् । उनीहरु माथि पनि जे जति भयो त्यो जोनसँग मिल्दोजुल्दो थियो । उनको अनुसन्धानको यो निष्कर्ष थियो कि यस्ता अपराध धेरैजसो महिला पार्टनर वा पूर्व पार्टनरमाथि हुन्छ र यो धेरैजसो घरेलु हिंसामा हुन्छ ।
वियरेका अनुसार ताजा अध्ययनमा आधिकांश सहभागीले आफ्नो जबरजस्ती शारिरिक सम्बन्धको अनुभवलाई ‘ करणी’ को संज्ञा दिएका छन् । यसलाई इंग्ल्याण्ड र वेल्सको कानूनमा बलात्कारको रुपमा नलिएकोमा उनीहरु दुःखी छन् । केट सिल्वरर बीबीसी,